Habeenkii ugu Dambeysay Noloshiisa Sh. Axmed Yaasiin
Xaaska u dhaxday Sh. Axmed Yaasiin oo u warramaysay Wargeyska Al-Qudus ee ka soo baxa London ayaa sheegtay in maalmihii ugu dambeysay nolosha Sh. Axmed Yaasiin la dareensiiyey in uu Shahiidayo, arrintaasina waxa uu wada gaarsiiyey ayay tiri qaraabadiisa iyo carruurtiisa oo dhan.
“Xubno badan oo qoyskiisa ka tirsan oo uu maalin ka hor dhimashadiisa uu la kulmay ayuu u sheegay in uu dareemayo in uu Shahiidayo oo uu Aakhiro doonayo oo uusan dunida dooneyn, waxay xustay xaaskiisa in ay jirtay cabsi ay ka qabeen cadowgooda Yuhuudda oo dhowr mar ku hanjabay in ay dili doonaan Sh. Axmed Yaasiin, hanjabaaddooda wixii ka dambeeyeyba inta badan qoyskooda gurigooda ma seexan jirin shiikhuna dhowr sanaba si toos ah guriga uma seexan oo xittaa anigu ma ogaan jirin halka uu ku hoydo, balse habeenkii ugu dambeysay noloshiisa wuxuu waqtigiisa ku qaatay isagoo ku cibaadeysanayay masaajidka, markii aan maqlay qaraxyada gantaallada Yuhuudda waxaa markiiba I gashay cabsi ah in gantaalladaasi lala beegsaday Sh. Axmed Yaasiin, waan soo cararay anigoo xitaa xijaabkeygii soo illoobay, waxaana markiiba ogaaday in qofka gantaalka lala helay uu yahay odaygeygii Sh. Axmed Yaasiin oo jirkiisii oo dhanba la waayay” ayay tiri Xaaskii uu ka geeriyooday Sh. Axmed Yaasiin oo intaa ku dartay “Allaha u naxariistee Sh. Axmed Yaasiin maalintaasi wuu soommanaa oo waxaa caado u ahayd noloshiisa in uu maalin kasta oo Isniin iyo Khamiis soomo”.
Dhinaca kale gabar uu dhalay Sh. Axmed Yaasiin oo lagu magacaabo Saamiya Axmed Yaasiin ayaa iyana sheegtay in Aabahood ay caado u ahaan jirtay in qoyska uu mar walba kulmiyo, ayna kala war qaadan jireen, balse kulankii ugu dambeeyey oo ahaa maalin ka hor dhimashadiisa uu u muuqday mid aad u murugo badan, kaddib markii uu aabbahood u sheegay in uu dareemayo in uu Shahiidayo oo uu aakhiro u socdo
W/D Amiim Yuusuf Khasaaro